BUQQIFAMA OROMOOTA SHAGGARII fi NAANNOO ISAA – Kutaa Shanaffaa – Welcome to bilisummaa
BUQQIFAMA OROMOOTA SHAGGARII fi NAANNOO ISAA – Kutaa Shanaffaa
Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kutaalee afran dabran akka argattanii dubbiftan nan abdaddha. Amma kutaa isa kana bakkuma isa dabre dhaabne irraayyi itti-fufnaa, yoo yeroo fi wanneen biroo isiniif hayyaman mee duukaa-bu’uuf yaalaa! Kana irratti dabaleesoo, kutaan kun isa xumuraa tahuu isaan asuma irratti, gurra isin buusuun gara wiirtuu dubbii kutaa kanaatti dabra.
Buqqifama Oromoota naannoo Shaggar akka fakkeenyaatti kan Oromoota Gullallee fudhachun, kutaalee dabran keessatti baldhinaan wajjumaan ilaallee jira. Oromoonni naannoo Shaggar kun buqqifama isa bara Minilik callaa otoo hin taane, mootummoota Habashaa dhufanii dabran shananii fi mootummaa isa ammaa kanaan buqqifamni irratti oofamaa ture, ammas irrumatti oofamaa jira. Uummanni naannoo kanaa akkuma Shaggar babaldhachaa adeemu, innis qeyee fi araddaa isaa irraa buqqifamaa adeeme. Silaa magaalaan kun dalga (“horizontal“) malee, ol (“vertical“) hin guddatuu amma manneen-dhoqqee Gafarsaa fi Buraayyuu irraa hamma Gaara Erer jalaa, Garjii fi gandeen Dirree Qubata Balaliyaa, Boolee duubaatti babaldhachaa jiru. Haatahu malee, buqqifamni inni ammaa kun akkuma buqqifama isa bara Minilik san suukkaneessaa fi badaa dha. Silaallee akka heera mootummaa Wayyaanee irratti barreeffameetti, magaalaa Finfinnee Shaggar keessatti fidhiin saba Oromoo ni eegama. Kun nama gowwoomsuu fi dabaaf kan heera san keessa gale malee, kan biraa hafee dhibba keessaa harki tokkichi-llee fedhiin saba Oromoo magaalaa kana keessatti hin eegamne. Garagalchoo taheeti fedhiin saba Oromoo magaalaa kana keessatti barbadaawaa jira.
Shaggar handhuura Oromiyaa irratti kan argamu tahee otoo jiruu, kunoo waggaalee 126 guutuu (1888-2014) aadaa fi Afaan Oromoo fayiif alagaa tahe argama. Magaalaa kana keessa uummanni Oromoo baay’inaan jiraatullee, dabalees karaa cufan isa marsee jirullee, guyyuu gara isaatti yaa’aa oolullee, wanneen isa barbaachisan gara irra-caalu guyyuu magaalaa kana “gabbarullee“, uummanni Oromoo guddichi kun, beekaa fi hissataan (hojii-jaalataan) kun guyyuu arrabsamaa, salphifaa oola. Kunoo, amma Habashoonni warra Tigaay kan duraanii caala itti-cimsuun Oromoota naannoo kana buqqisaa, qeyee fi gandeen qonnaan-bultootaa onsaa jiru. Dabraniituu lafa lafee Oromoo tahe kana, warreen isaanii fi nafxanyoota Amaaraa isaan haareyyii fi moofeyyiitti gurguratu. Sababa inbastimentii-tiin dhiiga-xuuxxuu fi lafe-nyaattuu biyyoota alaa, addunyaa mara irraa itti- waamanii qircachaa jiru. Uummanni Oromoo kallachumatti magaalaa Shaggar daangessee jiru, gosolii qaama Oromoo Tuulamaa yoo tahan, karaa Bahaa irraa gara sa’aan naannoftutti yoo deemne: Galaan, Gullallee, Aabbu, Meettaa Aabbuu, Bacho Badii, Meettaa Hoolotaa, Sulultaa fi Eekkaa tahu. Kana malee, Gullalleen karaa fuula Walloo irraa kan hafe, karaa hundaan goorolee fi gaarran jalatti gadeen ofii ittifatee hamma yoonaatti jiraate. Bulguun warra Minilik faallee isa liqimsee fixuu hin dandeenyee, kunoo amma bulguun warra Wayyaanee isa liqimsaa, liqimsiisaa jira. Seenaa Oromoota Gullallee, Eekkaa fi Galaan faa isa dhiigaan barreeffamaa nu dhaqqabe kana, kunoo ammas dhiigaa akka dhiigaan barreessinuuf, gabroomfatoonni Habashaa nu dirqisiisaa jiru.
Ammaan-tana massaan (sababni) warri Wayyaanee qonnaan-bulaa Oromoo buqqisaa jiraniif, dirbantii (“metropolis“) Shaggarii fi naannoo isaa misoomsuu fi industiroomsuuf kana jedhamu. Guddinnii fi misoomni manneeni fi gandeen uummataa buqqisu, duudhaa fi aadaa uummata barbadeessu, seenaa uummataa awwaalu, xinnaannoo (“ecology“) summeessuu fi gaaziin faalu, afaan uummata naannoo sanii, Afaan Oromoo mancaasuun kan warra alagaa bakka isaa buusu guddinaa fi misooma mitii,duguuggii uummataa fi aadaa Oromoo irratti xiyyeeffame. Mee amma akka dubbii nuuf gabaabsuufan barreeffata gabaabaa tokko, isan dhiyeenya kana walaloo tokko kan: “LAFEE OROMOO CACCABSITEE NYAATAA?” jedhamu wajjin, mandheewwan Oromoo garagaraa irratti baafamen armaan gaditti isiniif dhiyeessa.
“Akkuma harra mandhee Oromoo isa “gadaa.com” jedhamu irratti dubbiftan, warri abbaa qawwee kunoo ijuma teenya duratti: Aannolee Lammaffaa fi Calanqoo Lammaffaa akka biraatti adeemsisaa jira. Habashoonni Tigraay humna qawwee fi humna abbootii qabeenyaa kanneen warra alaatti hirkachuun, Oromiyaa teenya akka dullacha masqalaatti qircatanii qircisiifachaa jiru. Kan nama dhibu warra isaan akka diina tokkoffaatti ilaalaa turan, nafxanyoota haareyyii fi moofeyyii kanneen Habashoota Amaaraa waammachuun, lafa lafee Oromoo tahe: Ambo irraa hamma Malkaa Jabduu fi Dirree Dhawaatti, Jimma irraa hamma Kombolcha Warra Qaalluu fi Baatii isaan Wallo keessaatti saammachaa, warreeni fi firoottan isaanii badhaasaa, waraabeyyii akka isaanii kanneen baargamaatti gurgurachaa jiru. Hubaddhaa! Awwaallan haadholii fi abbootii keenyaatu, dabreeyyuu kan jagnoota keenyaa kan akka Tufaa Munaa, Birraatuu Goolee, Waamii Garoo, Shabbuu Bordee fi Ilaansoo Halloo faatu buqqifamaa jiraa! Laggeeni fi harawwan Oromiyaatu summii fi xurii-ajaawaa gabroomfatoota Habashaatiin faalamaa jiraa! Daa’immaan Oromootu summii kanan dararamaa jiraa, itti-dabaleetuu dararamuuf deemaa! Yerooniyyinee iyya dabarsinuu fi, ee akka Oromoota Kurnan Gullallee bara Minilik sanii: “uu uu qabi, dhayi” jennu abadan ammuma! Hayyee tokkummaa, tokkummaa! Karaa hundaan ijaaramuu, ijaaramuu! Karaa hundaan hidhachuu, hedhachuu dha mallisaa!”
“Jalqabaaf bakka jirru marattuu walagayii fi hiriiratti gadi haa yaanu! Lakkii, ishiin namoonni keenya tokko tokko waan hundumaa beellama kennuun gara boruutti dabarsan, “ennaa Oromiyaan bilisoomte furmaata argata”, nuun jedhan kun gonkumaa hin tahu. Wanneen akkanaa kanatti xiyyeefannee tarkaanfachuun, sirumaa qabsoo saba keenyaa akka jabeeffachaa deemnu nu taasisa malee, kan isa laaffisuu miti! Akkuma yommuu leellisaa Minilik, Teedii Afroo fi warra Biiraa Baddallee irratti olkaane san kana irrattis bobbawuu qabna! Dabaleesoo, ishiin qaruuteewwan warra Wayyaanee: “Magaalaawwan naannoo Finfinnee Shaggar guddisuu fi misoomsuufi” nuun jedhan, dubbii sobaati. Uummata keenya qeyee fi araddaa isaa irraa buqqisaa, aadaa fi afaan keenya balleessuun kan warra abbaa qawwee bakka-buusaa, namaa-sa’a, lafaa-muka summeessaa, barbadeessaa guddinnii fi misoomni wayiituu hin jiru. Kun biyyee fi biyya Oromoo amaaromsuu isa lammaffaati! Kun biyya duubatti-hafaa fi warra duubatti-hafaan kan adeemsifamu malee, biyyoota qaroomina ammayyaatiin tarkaanfatan keessatti magaalaawwan guguddoon isaan xixiqqoo hin liqimsani, hin alkafatani. Fakkeenyaaf magaalmataa Biyya Jarmanii, Barliin ishiin amma keessa taa’ee waraqaa tana shalalu, naannoo ishii magaalattiiwwan xixiqqoo hanga: Duukam, Daalattii (“Alamganaa”), Sabata, Buraayyuu, Koloboo (“Mannaagashaa”), Aqaaqii Basaqaa, Qilinxoo, Sandaafa, Laga Xaafoo, Bakkee, Caancoo fi Sululta faa hin geenye 20 oltu jiru. Motummaan Jarmanii mootummaa qaroomee fi dimokiraatawaa waan taheef, magaalattiiwwan kanneen Barliin jala galchuuf hin aggaamu. Yoo tasa aggaamee immoo uummata naannoo tanaa callaa otoo hin taane, Jarman guututuu itti-ka’uun aangoo irraa isa buusa. Biyyoota qarooman kanneen keessatti magaalaawwan xixiqqootu filatama; jaalatama. Walittii qabiitii summeessin kun kan warra duubatti-hafoo akka warra Habashaa kanaati. Innin waayee Barliin irratti jedhe kun Roomaa fi Paaris, Osloo fi London faafis kan tahu. Kanaafuu, nuti uummata keenya fi Oromiyaa teenya summii fi xurii, diiguu fi mancaasuu warra abbaa mancaas jalaa oolchuuf, alaa-manaa oljennee mee haa tarkaanfannu! Mee iyyinee iyya haa dabarsinu!“
Mee isan kanaa olitti waayee magaalaa Barliin faa kaasuun biyyoota teeknolojii fi saayinsiin sokkan keessatti, magaalaawwan xixiqqootu irra filatama jedhe san baldhinaan haa ilaallu. Kanan as irraatti jala harriqee akkan kaasuuf, na dirqisiisee wallaalummaa fi duubatti-hafummaa ginni-bittee Tigraay hafarsaa jiruu kana. Isaan keessaa gariin isa “guddinaa fi misoomaan” nu gowwoomsuuf tattaafatan sanillee achi darbachuun, “jaalattanis, jibbitanis karoorri keenya hojii irra ooluu qaba” nuun jechaati jiru. Warri Wayyaanee kun ifumatti nama gowwoomsuuf aggaamanii yommuu namni harkatti dide, suduudumatti (ifumatti) maalummaa isaanii namatti agarsiisu. “Wanni isin galchu hin jiruu, numatu isiniif murteessa!” nuun jedhu. Maali Mallas Zeenaa isaanii: “kan Dargiin waggaalee 17 isin bite, nuti waggaalee 27 isin bituu hin daddhabnu“, nuun jedhee ture mitii? Harra ardii Oroppaa kanatti namni magaalaawwan xixiqqoo keessa jiraachuu sonaan filata. Hojiif jedheeti malee, namni magaalaawwan guguddoo irraa bayee baadiyyaa keessatti mana ijaarratee jiraachuu fedha. Kunis akka magaalaa Shaggar tahu baatus, magaalaawwan guguddoo keessa qilleensa faalamaatu heddummaata. Keessumaa namoonni ijoollee qaban, magaalaawwan xixiqqootti galuun ijoolleen isaanii akka qileensa qulqulluu unacha guddattu fedhu. Habashoonni wallaalummaa fi duubattafummaa, farrummaa margaa-mukaa,bulgummaa bosonaa-daggalaa isa Gondorii fi Maqalee irraa baattatanii, qawwee wajjin obbolaa-lakkuu godhachuun Oromiyaa seenan kana, “guddinaa fi misooma” taasisuun nutti gurgurachuu barbaadu. Waraabeyyii biiftuun itti-bariite tahuun isaanii gaanaa hin galleef jechaa dha! Eekaa: oftuulummaan, ofguurummaa (“arrogance“) fi sanyummaan akka ija nama cufu ni beekna. “Hin bareetu seetee intalli mana keessatti a–e“, jedha Oromoon keenya waan akkanaatiin!
Koloneeffatoonni Amaaraa ofii-saanii, miseensota birookiraasii fi waraana isaanii bira dabranii uummata isaanii kabajamaa fi miskiina kana jibbaa fi tuffii, oftuulummaa fi sanyummaa qaban san isas barsiifachuuf carraaqaa jiru. Garuu, wanni kun isaaniif akka fiixaan hin baane abdii guddaa qabna. Shaggaris, Oromiyaanis jara qawween itti-dhufe san callaa miti kan keessummeessaa, afaanii of-fuudhee sooraa jiru. Uummanni Habashaa kabajamaan kun, kan warra Amaaraas, kan warra Tirgees rakkoo fi gadadoo, beela fi jeejee baqachuun duris otoo Oromiyaan teenya hin qabamin, erga qabamtee boodas numa dhufu. Aadaan Oromoo inni keessummaa kabajuu fi inni rakkataatti waan qabu maraan birmatu sun akka jarreen kanatti harkisaa hin qusanne, afaansaa hin waakkanne isa godheeti jira. Ginni-bittee Habashaa fi illiitonni isaanii jaalatanis, jibbanis akkuma jagnichi keeenya inni nu jalaa kufe, Jaarraa Abbaa Gadaa jedhe san: “bilisummaan Oromoo akka du’aatii waan haftuu miti!“
Isaan nu takka Biyya Hindii nu geessanii nu fidanis, takka Biyya Faransaa nu geessanii nu deebisanis, takka akka Alaqaa Taayyeen jedhu san “bishaan Haroo Walaabuu keessaa” akka qorxummii nu baasanis,nutii fi isaan akka biyyoota ollaa tahaniitti waggaalee kuma danuu fi bardhibbee meeqa meeqa walmaddii jiraannee jirra. Isan jaalatanis, jibbanis uummata Oromoo kitila 46 (46 000 000 +) ol tahe kana Gaafa Afrikaa irraa buqqisuun ardiiwwan biroo geessanii qubachiisuu hin dandayanii, akkuma biyyoota ollaalee tahaniitti walcinaa jiraanna. Ennasis uummata isaanii rakkatee namummaan namummaf nutti dhufu, akkuma aadaa keenya isa boonsisaa kanaatti waan qabnu maraan keessummeessina. Kanaaf, lafarraa-duguuggii (“ethnic cleansing“) isaan kunoo amma ijjeen teenya fi ijjeen addunyaa fuulduratti uummata Oromoo isa naannoo Finfinnee Shaggar irratti adeemsisaa jiran waltaanee oljechuun ofirraa qolachuu malee, filmaata biraa hin qabnu. Jarri kun uummata keenyatti ba’aa inni baatee deemuu hin dandeenye itti-fe’aa jiru. Akka nama tokkootti waltahuun akka fincila-diddaa gabrummaa jabaannee itti-fufnuuf nu dhiibaa jiru. Egaa, erga isaanumtuu barbaadanii akkuma Falastiinotaa, isaan akkuma keenya qeyee fi araddaa ofirraa buqqifamnaan intifaadaan olka’anii sanaa nutis: intifaadaa, intifaadaa jechuun garuma fuulduraatti tarkaanfachuu qabna!
Mee walaloo kiyya tokko, kanan oggaa isaan teessoo Mootummaa Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti hariyan san, hiriira nagaa isa Oromonni Biyya Jarmanii jirru goone irratti, kan dubbifame keessaan tarree lama qofa as irratti isiniif tuqa:
“Adurreenillee ishiin nagaa qabdu
Yoo goleetti dhiiban ciniinun daddhabdu“*
Maarree, adurreen ishiin akkasitti nagaan beekamtu yoo goleetti (maxxanatti-“corner“) dhiibamte, qeensa fi ilkaan ishii saniin namatti kaati. Kun kan adurree duwwaa otoo hin taane, uumaa ilmoo namaa fi ilmoolee bineeyyii-ti. Warri Wayyaanees, nafxanyoonni haareyyii fi moofeyyiin kanneen warra Amaaraas kana beekuu qabu! Harra nuti dhalawwan Oromoo bineensummaa mootummoota Habashaa kanneen durii (Hayila-Sillaasee fi Dargii) fi isa ammaa kana baqachuun garaa waaqaa hunda jalatti faffacaanee argamna. Adaala Afaarii fi Somaaliyaa miilaan kunnee, kaan irbaata qurxummii nama-nyaataa, shaarkii jedhamu irraa kanneen hafne; daangaa Sudaani fi Liibiyaa qaxxaamurree, Adaala Sahaaraa miilaan keessa dabarree, Garba Jiddu-Galeessaa irratti kanneen garagalfama yabaloo (bidiruu) irraa hafne, biyyoota hedduu geenyee jirra. Kunoo, nuti harra Kanaadaa irraa hanga Meeksikoo fi Arjantiinaa-tti, dachee Utubaa Boroo (“North Pole“), Noorwee irraa hanga Kaayiroo fi Afrikaa Kibbaatti, Senegaal irraa hanga Biyyoota Arabaa fi Indiyaatti, Naarobii irraa hanga Awustiraaliyaa-tti faffacaanee argamna.
Ginni-bittee Habashaa inni waraabeyyiitti of-geeddaruun nu “nyaatee“, kanneen “nyaachaaf” isatti heddumaanne manneen hidhaatti nu naqee, kaan irbaata xiyyiitii godhatullee kunoo numa jirra! Minilikis, Hayila-Sillaaseenis, Dargiin Mangistuu Hayila-maaramis, Wayyaaneen Mallas Zeenaas, lafarraa duguuganii nu fixuun gonkumaa hin taanefii, kunoo humna Waaqatiin numa jirra! Kan inni akka bineensa daggalaa nu godhate, kunoo biyyoonni kanaa olitti kaafne namummaaf namummaan nu simatanii akka namaatti jiraachaa jirra. Dachee teenya irratti, biyyuma keenya keessatti akka ilmoo namaatti jiraachuu nu hanqisanii, biyyoota alagaa keessa akka ilmoo namaatti jiraanna. Kanaaf, hayaa kanaaf qonnaan-bultoonni Oromoo isaan naannoo Shaggaris tahee, isaa naannolee biroo kanneen buqqifamuun carraa isaanii tahe, dabreetuu uummatoota Sulula Laga Omoo, Gambeellaa fi Beenishaangul isin cinaa jirraa, iyyinee iyya isiniif addunyaatti dabarsinaa jabaaddhaa jennaani!
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kunoo akkuma beektan barreeffama kana kutaa tokko irraa hamma kutaa shanaffaatti qoqqooduun isiniif dhiyeesseen jira. Dubbiin amma irratti walmariyachaa jirru tun dubbii laayyoo taatee miti! Dubbittiin dubbii lafaa fi lafee uummata keenyaa tan ilaaltu. Dubbii laayyoo hin taane tana, dubbii lafee akkanumatti dubbifneetoo bira kutuu hin dandeenyu. Sirriitti wanneen gochuun nu irraa eegamu irrattis walmariyachuu qabana. Uummanni Oromoo guddichi kun, uummata akka lafaati. Uummata akka lafaa waan taheef, kunoo waggaalee 140 gabrummaa fi roorroo warra Habashaa obsa guddaadhaan baachuun as gaye. Kunoo, ammaan tana warri Wayyaanee, nafxanyoonni haareyyii fi moofeyyiin warra Amaaraa obsa isaa isa guddaa san fixachiisaati jiru. Sabni guddaan akka saba Oromoo kan obsa guddaan gabrummaa baatee jiraate, gaafa ba’aan gabrummaa sun sonaan itti-ulfaatee baachuu daddhabe, akka gafarsa madaayee taha. Gafarsa waraanamee kufee, booda olka’uun nama isa waraane sanatti fiigu, wanni isaa dhaabuu dandayu tokkollee hin jiru. Mukaa fi kattaallee jijjigsuun kan isa waraane sana bira dhaqqabuun humna qabu hundaan, gaafa qabu hundaan buqqisee garagalchuun barbadeessa.
Ginni-bittee Habashaa fi illiitonni isaanii kan warra Tigrees, kan warra Amaaraas jarreen isa harraa malee, kan boruu hin yaanne, uummataa fi saba Oromoo akka gafarsa kanaa olitti himame kanaa gochuuf deemu. Gaazexeessaan Amaaraa tokko: “Oromoonni Addis Ababaan keenya jechuun, babaldhachuus hin qabdu nuun jechuun qoosu” jedhee ture. Barateeyyiin (“educated“) isaanii waayee Aaannolee fi Calanqoo irratti “ni sobdu” nuun jedhanii jiru. Gariin keessa kutaniiyyuu uummanni Oromoo fi Muslimoonni Toopphiyaa waayee seenaa bardhibbee 16-ffaa irratti Habashoota “dhiifama gaafachuu” akka qaban ololaa fi duula hamaa adeemsisaa jiru. Dabranis siidaawwan Minilik faashistichaa magaalaawwanii fi gandeen keenya keessa akka dhaddhaabnuuf nu abboomaa jiru. Muummiyyeewwan Amaaraa isaan: paartiiwwan, mandheewwan interneetaa, buufata raadiyoolee fi tiibiiwwanii, gaazexaalee, kitaabeewwanii, paaltokii-maaltokii faa gaggeessan, alaayyis biyyaayyis duula fi maqaxureessii jibbamaa fi jibbisiisaa Oromoota fi saba Oromoo irratti oofaa jiru. Jarreen kun akkanatti:uummata Oromoo, saba Oromoo fi Oromiyaa madeessaa, “wajjin taanee Toopphiyaa kottee warra Wayyaanee jalaa haa baafnu!” nuun jedhuu? Impaayera Toopphiyaa isaanii tana, ishii daran bosobbofta tana isaanumti of-irratti diddiigaa akka jiraan gowwaa dhiisitii raatuunillee ni beeka!
Kan nama dhibu jarreen kun maqaa uummata Amaaraa kabajaamaa kanaan daldalaa jiru. Uummanni Habashaa warri Amaaraas, warri Tigrees bineensummaa ginnta-bittee isaanii jalaa, jeejee fi beela, rakkoo fi gadadoo jalaa baqachuun yeroo addaddaa gara biyya teenya, Oromiyaa dhufanii jiru. Uummanni Oromoo abbaan firaa fi abbaan nagaa isaan simachuun waan qabuun isaan keessummeessee argama. Kunoo, amma muummiyyeewwan isaanii kun harka-laateef nyaachuun, qodaalee itti-nyaatan caccabsuun namoota nagaan wajjin jiraatan walitti kakaasuuf summii hamaa tuttufaa, bittimsaa jiru. Maali gama sanaa jaarmaan, gurmee fi paartiin tokko kan warra uummatoota walitti diruuf deemu kanaan: “lakkii, waan akkanaa dhiisaa!” jedhuun dhabama? Nafxanyoonni fi jalaa-jaleewwan isaanii kunoo Oromoota irratti duula afaanii bira kutaanii, duula irree fi eeboo jalqabaniitoo jiru. Fakkeenyonni lamaan: inni magaalaa Biyya Amaaraa, Baahir Daari-tti namoota ispoortii Oromoo irratti tahee fi inni barattoonni Amaaraa magaalaa Oromiyaa Kibbaa, Shaakkisoo-tti adeemsisan nafxanyoota haareyyii fi moofeyyii kan qullaa isaanii dhaabee maalummaa isaanii nuu fi addunyaatti agarsiisu!
Seera Toopphiyaa isa amma jiru keessatti, naannoleen saglan alaabaa naannoo ofii fi kan Toopphiyaa fannifatu. Oromiyaa keessatti alaabaan Oromiyaas, kan Toopphiyaas walcinaa kaayamu jechaa dha. Ijoolleen Amaaraa isaan magaalaa Shaakkisoo, mana-barumsaa oliyyaa keessaa garuu, oggaa alaabaan Oromiyaa fannifamu itti-qoosuu, itti-wacuu fi arrabsuu bira dabruun buqqisanii darbachuuf itti-ceyani. Kana irratti kan walitti-bu’uutiin barattoota saboota lamaanii jidduutti jalqabame. Ijoolleen Amaaraa miskiinonni kun hubaatii (“victim“) baattuuwwan “PHD“, “MA” fi “BA” warra Amaaraa tahan jechaa dha. Nama sammuu fayyaalessaan yaaduuf, wanneen amma illiitonni Amaaraa Oromoo fi Oromummaa irratti adeemsisaa jiran hin galuufi. Ammoo, nu Oromoota irraa maal, maal faatu eegama? Maal, maal faa gochuu qabna? Nu Oromoota aadaa fi duudhaa keenya boonsisaa kanatu, oftuullummaa fi sanyummaatti akka hin amanneef nu dhoowwa! Oftuulummaa fi sanyummaa illiitota Habashaa kana, namummaa fi obbolummaa ilmoo namaatiin ofirraa qolachuutu karaa isa qajeelaa fi isa nama baasu taha! Sirna Gadaa raajeffatamaa san Habashoonni humna qawweetiin itti-duuluun balleessanillee, inni hin bannee lafee fi dhiiga keenya keessatti baqachuun jiraatee; ammas jiraachaa argama. Seera Caffee Gadaa isa lammiiwwan mara walqixxummaan bulchu sanatu, kaayyoo amantii Oromoo, yaada bu’ura Waaqeffannaa isa: “ilmoon namaa marti, amantii fi afaanonni isaa marti uumaa Waaqaati; walqixxee dha” jedhuu fi isa “ilmoo namaatiin daldaluun haraamuu dha; hooda; oola!” jedhu sanituu ,hardhas akka nuti walqixxummaa fi obbolummaa dhalawwan namaa maraatti amannu nu taasisa. Dabalees isaan kun mirgaa fi haqa keenya isa gabroomfattoota Habashaatiin nu irraa mulqame kana waltaanee, oljechuun akka deebifannee gonfannu nu godha. Seera Gadaa fi amantii Waaqeffannaa keessatti mirgaa fi haqa ilmoo namaa dhiisitii, kan bineeyyii-llee ni kabajama. Namaa-sa’a, margaa-muka, laflootuu-baratuu faa barbadeessuun, mancaasuun dhoorkaa dha ture; hooda ture!
Kanaafuu, aadaa fi duudha keenya irratti hundoofnee, safuu fi safeeffata uummata keenyaa qabannee, cimnee walcimsuun, ijaaramnee walijaaruun, tokkoomnee waltokkoomsuun, karaa maraan hidhannee walhidhachiisuun bilisummaa fi walabummaa keenyaaf tarkaanfanna. Birmadummaa uummata keenyatii, bilisummaa saba keenyatii, walabummaa biyya keenyatii qabsaawuun amantii keenyaanis, aadaa Gadaa keenyatiinis eebbifamaa dha! Dabreeyyuu seera Tokkummaa Mootummoota Waltahanii-tiin (ToMoWa – “UNO“) deeggaramaa dha! Mee haa tahuutii, waayee isa barreeffamni kun irratti xiyyeeffamee jechuun, waayee “Buqqifama Oromoota Naannoo Shaggar“, kan ilaalu irratti maal maal faa gochuu akka qabnutu kanaa gaditti tokko tokkoon isiniif tarreeffama:
1) Dubbiin tun dubbii Oromoota Shaggarii fi Naannoo isaa callaa ilaaltu waan hin taaneef, nuti Oromoonni alaa-manaa waltahuun kana irratti xiyyeeffachuun sochowuu dha qabna! Dubbiin tun bubbii saba keenyaa waan taateef, akkuma ennaa sana waayee faarsituu Minilik sanaa, Teedii Afroo fi Biiraa Baddallee irratti waltahuun bobbaanee sanatti, isa kana irrattis waltahuun irratti bobbawuu qabna!
2) Nuti Oromoonni biyyambaa (“diaspora“) jirru akkuma bara Wayyaanonni magaalmataa Oromiyaa, Finfinnee Shaggar irraa gara Adaamaatti dabarsanii hiriira-nagaa bawuun addunyaa guutuu keessatti dura-dhaabanne san, isa kanas akkanumatti dura-dhaabachuutuu nu baasa. Kanaaf, nuti Oromoonni ardiiwwan: Ameerikaa Kaabaa, Ameerikaa Kibbaa, Oroppaa, Afrikaa, Asiyaa fi Awustiraaliyaa keessa biyyoota fi magaalaawwan addaddaa keessatti argamnu dubbii tanaaf xiyyeeffannoo fi ilaalcha olaanaa kennuun: walgayiiwwan kurfeessuun irratti walmariyachuu, hiriira kurfeessuu, waraqaalee garagaraa qoppheessuun miidiyaalee – gaazexoota, barruuleewwan, raadiyoolee, tiibiiwwan, interneetota faa irratti akka dubbatamanii fi akka bayan gochuu dha. Ani akkan qalbeeffaddhetti nuti yeroo mara qopphii hedduu cimaa kurfeessineeti warra alaa, jechuun warra biyyoota keessa jiraannuu san heddumminaan waamuu daganna. Qopphiilee akkanaa kana irratti namoota gaazexaa fi namoota raadiyoo waamuu cufumaa dagannee jirra. Fakkeenyaaf, oggaa addunyaa maratti IRREECHA akkanatti bareeduu fi isa aadaa Oromoo akkasitti miidhagsee agarsiisuu qoppheessine, gaazexoota biyyoota alaa meeqa irratti baasifannee argamna? Amma barattee kana daddafnee wayyeeffachuutu karaa qajeelaa taha.
3) Nuti Oromoonni oggaa buqqifama Oromoo kaafnu, dubbannu, barreessinu mara buqqifama uummatoota Sulula Laga Omoo, kan warra Gambeellaa fi warra Beenshangul faas himuu fi barreessuu qabna. Kana kan nu dirqisiisuu namummaa fi harqoota gabrummaa Habashaa isa wajjin jalatti argamnuu kanaati. Keessumaa Habashoonni Wayyaanee fi kanneen warra Amaaraa uummatoota Sulula Laga Omoo kanneen sablammiiwwan addaddaa tahan kan lakkoofsaan kuma shan, kuma kudhan, kuma digdama, kuma soddomaa faa tahan, warra dur lafarraa duguuggii Minilik faa jalaa miliqanii hammi tokko as gayan, hardha lafarraa buqqisaati jiru. Habashoonni dur isaan kana akka bineensa daggalaatti adamsuun qabanii, gabaa biyya keessaa fi biyyoota alaatti gurgurachaa turani. Isaan kun harrallee Habashoota akka lammiiwwan Toopphiyaatti hin ilaalamani. Hardhallee gabroota (“slaves“) jedhamaniitoo arrabsamu, salphifamu. Keessumaa barateeyyiin Oromoo fi Waldaan Qorannoo Oromoo (OSA) kanaa irratti xiyyeeffachuun waayee uummatoota kanaa: biyyoota Afrikaa fi Tokkummaa Afrikaa (AU), Afro-Ameerikaanota, ToMoWa (UNO) faatti beeksisuu qabu! Ee, “Gabroonni, Gaallonni, Walaamonni, Gudeellonni, Shanqilloonni, shirrixaamonni, minaa-mintoonni“, kunoo harras lafarraa duguugamaa akka jiranii fi akka lafa irra-qubatan wajjiniin gurguramaa jiran, addunyaatti beeksisuu qabna!
4) Nuti Oromoonni keessumaa kanneen biyyambaa keessatti argamnu, jaarmolee fi gurmeewwan uummatoota kanaa olitti kaafamanii fi kan warra Afaari fi Sidaamaa faa waliin, obbolummaa akka haaraatti bu’ureeffachuun waliin sochowuun mishoo taha. Amma uummanni Oromoo mana hidhaa Habashaa, Karchalleetti uummatoota Kibbaa kan lakkoofsaan hedduu tahan wajjin hidhamee jira. Uummatoonni gabroomfaman kun Karchallee koloneeffatoota Habashaa, wajjumaan caccabsanii akka keessaa bayan mamiin tokkollee hin argamu!
5) Jaarmoleen Bilisummaa Oromoo kanneen addaddaa garagarummaa isaan jidduutti argamu dhipphifachuun, yookaan immoo hiikkachuun wajjin hojjachuu fi dabreeyyuu Odaa tokko jalatta walitti qabamuun tarkaanfachuutu, isaanis, uummataa fi saba Oromoos kan baasu taha. Waggaalee 24 guutuu addaan-faffacayanii adeemuun kun isaaniifis, Oromiyaa teenyaa fis hin tollee, mee amma uummata Oromoo guddichaa fi beekaa kana dhagawuun tokkummaa Oromoo nuuf haa jabeessani. Ijaarsonni kun dirree qabsoo Oromiyaa keessatti, daran cimuuf halkanii-guyyaa irratti hojjachuu qabu!
6) Uummanni Oromoo bakka jiru maratti, alaa-manaa ijaaramuu qaba. Inni ijaaramee immoo walitti qindeeffamuutu akka. Furtuun qabsoo saba gabroomfamee “ijaaramuu dha“! Hayyee, ijaaramuu, ijaaramuu, alaa-manaa ijaaramuu! Xiqqaa-guddaan ijaaramuu! Dhiiraa-dubartiin ijaaramuu! Inni ijaarame kun immoo walitti qindeeffamuun, sochowuu dha dubbiin qabsoo bilisummaa! Erga ijaaramee, erga walitti-qindeeffameewoo? Eekaa, karaa maraan hidhatanii wal-hidhachiisuu dha! Hayaa, karaa maraan Oromiyaa guutuu keessa bakka maratti, hidhatanii wal-hidhachiisuutu dubbii bilisummaa fi walabummaa Oromiyaati. Abadan dubbii tanaaf, beellama kennaniifii gara boruutti dabarsuun waan tahuu miti! Yaa Oromoo koo erga ijaaramnee, erga tokkoomnee, erga hidhannee nuti gaalana Abbayyaatii, gabroomfatan kamiyyuu nu dura dhaabachuu hin dandayu. Barreeffata kana keessatti Seenaa Ka’umsa Oromoota Kurnan Gullallee, isa bara 1878 isiniif ibseen ture. Qoonni dubartoonni Oromoo Gulllallee, ka’aniitoo biyya kakaasuuf godhan sunis dhiyaatee ture. Waayee: iyyii iyya dabarsii fi dubbii, “uu uu uu qabi, dhayi!” sanaas isiniif kaaseen ture. Kun nuti itti-beeknaan, akka gaariitti irratti hojjannaan kan tahuu dandayu.
Mahatama Gandhi: “nuti waltaanee hundi keenya Gaara Himaalayaa irra baanee yoo gadi-fincoofne, fincaan keenya kuniyyuu koloneeffatoota Ingilizii haree haxawuun nurraa baasa.”, jedhee ture. Bara inni kana jedhe san uummanni Indiyaa kitila 400 (400 000 000) ture. Koloneeffatoonni Ingilizii fi gargaartuuwwan isaanii, miseensonni waraana Ingilzii faa yoo heddummaatan kuma dhibba lama (200 000) tahuuyyu. Ani kanan isa kana as irratti kaase, karaa nagaatiin walabummaa keenya arganna jechuuf otoo hin taane, uummanni Oromoo guddichi kun ijaaramee, tokkoomee, hidhatee sochoonan qabsoo isaa bakkaan gayachuu akka dandayu jala harriquufani. Inni namoonni keenya tokko tokko “karaa nagaatiin, karaa dippilomaasitiin, lammummaa Toopphiyaa argachuuf” faa nuun jedhan kun, karaa bilisummaa otoo hin taane, karaa gabrummaa fi karaa badiisaati. Uummannii fi sabni Oromoo inni humna meeshaa waraanatiin cabee, ammallee humna meeshaa waraanatiin dhiddhiitamaa jiru, humnuma meeshaa waraanaa saniin bilisummaa ofii deebiseetoo gonfata! Kanaaf immoo uummanni Oromoo: “ani meeshaa waraanaan dhabe” jedhee uummata nyakkisuu miti. Akkan kanaa olitti ibseetti, nuti karaa maraan ijaaramnee olkaanan, meeshaan waraanaa achuma Oromiyaa keessa ciisaa jira. Gabroomfataa meeshaa waraanaa mataa irraa hamma miilaatti hidhatee: namaa-sa’a, margaa-muka, lagaa-hara faa summeessaa, gubaa, barbadeessaa jiru irraa hiikkannee of-hidhachiifnee sochowuunnamaanis, Waaqaanis eebbifamaadha!
7) Oromoonni Naannoo Shaggar kun yommuu buqqifaman isaan wajjin: afaan, aadaan, seenaa fi amantiin Oromoo Waaqeffannaan buqqifama. Oromoonni naannoo kanaa itti-duula fi duguuggii, bara Minilik irraa kaasuun itti-fufaa as gaye ofirraa qolachaa as dhaqqabanii jiru. Naannoo seena-qabeessicha kanatti Afaan Amaaraas, Amantiin Ortodoksiis daangaa magaalaa Shaggar irratti dhaabatee hafa. Uummanni Oromoo kun guyyuu amantii Waaqeffataa duukaa kan bu’aa oolu. Galmi akkaan beekaman sun, Galmi Maaram Haadha Abbayyii wiirtuu Finfinnee, Birbirsa (Piyaassaa – Araadaa) irraa wantee (kiilomeetira) 18 callaa fagaachuun, Gaara Hococaa jalatti ammayyuu argama. Afaan Amaaraa ijoollee manneen barumsaa galte duwwaatu beekama malee, qunnaan-bulaan Oromoo waa tokkollee hin beeku. Warri Wayyaanee fi nafxanyoonni Amaaraa isa kana balleessuuf, kan Minilik faan, Hayila-Sillaasee faan, Dargiin faa yaalanii daddhaban fiixaan-baasuuf maqaa magaalaa babaldhisuutiin, maqaa guddinaa fi misoomatiin itti-ka’ani. Kana malees, birbirsi, heexoon, odaan, harbuun, qilxuu fi gaatiraan Oromoo kanneen wagaalee 200 ol tahantu naannoo kanatti ammallee: Gooroo Sulultaa, Gaara Koloboo fi Gaara Hococaa, Tulluu Furii, Gaara Erer, Gooroo Qabbanaa jalaa fi gubbaatti argamu. Isaan kanas barbadeessuun lafee fi dhiiga Oromoo barbadeessuu dha. Mootummaan Wayyaanee inni gara bineensummaatti of jijjiire kun bosona Oromiyaa, Iluubbaa Booraa naannoo Yaayyoo irraa oggaa mummuree, cicciree barbadeessu, sunmtuu mee bosona UNESCO-n beekame agarreeti jirra. Kun roorroo hamaa isa nafa uummata Oromoo buqqisuu wajjin kan addaan-bawuu miti! Kunoo, ammammoo hambaa qaroomina Oromoo isa durii-durii kanneen naannoo kanatti argaman, Malkaa Quncuree fi Maaram Adaadii faa buqqisuuf deema. Isa kana hundaa alaa-manaa waltaanee dura-dhaabachuu qabna!
8) Amumayyuu warshaalee fi industiriiwwan magaalaa Shaggarii fi magaalaa Aqaaqii Basaqaa keessatti argaman dhangalayaa summaawaa, gattaa faalamaa fi kosii ajaawaa gandeeni fi qeyeewwan qonnaan-bulaa Oromootti gaddhiisaa jiru. Bishaan-lagaa fi bishaan-boollaa inni uummanni Oromoo dhugu summaawee jira. Keessumaa Oromoonni naannoo Aqaaqii Baldhoo (“Abbaa Saamu’eel“) jiran, namaa fi horiin isaanii dhibee kanarraa dhufeen rakkachaa jiru. Kana irratti Mootummaan Naannoo Oromiyaa fi Bulchiinsi Magaalaa Shaggar walmariyachuun fala hatattamaa irra gawuu qabu. Dhangalayaan kunii fi kosiin kun boolli hedduu gadi fagatee qotameefii achi keessatti gubachuufii gadi-fageenyaan awwaalamuu qabu!
9) Erga Habashoonni barbaadanii, erga isaan goleetti nu dhiibanii, waltaanee Afaan Amaaraa inni qawween biyya keenya seenee, qawween nutti fe’ame kun akka nurraa ka’uuf warraaqna, sochoona! Oromiyaa mara keessatti ijoolleen Oromoo wanni ishiin afaan kana barattuufis, wanni afaan kanaan barattuufis sababni tokkollee hin argamu. Kutaa tokkoffaa irraa hanga kutaa 12-tti Afaan Oromootiin baranna. Afaan Ingilizii immooo akka afaan addunyaalessaatti barachuu san ittuma-fufna. Kana irratti dabaluun ijoolleen Habashaa kanneen Oromiyaa keessa jiraatan, Afaan Oromoo barachuu fi isaan barachuunis dirqama itti-taha. Kana irratti dabalee ijoolleen Habashaa kun bakka gamtaataan jirtuutti afaan ofiitiinis barachuun sirriidhuma. Namoonni Amaaraa isaan Oromiyaa keessa akka waaraatti jiraatan, jechuun namoota yeroof dhufanii deeman otoo hin taane, afaan biyya keessa jiraatanii kana, Afaan Oromoo barachuu fi dubbachuun seera biyyoonni marti ittiin-bulani. Nama barabaraan nu keessa, nu wajjin jiraatee afaan keenya dubbachuu didu irraa, waa bituu fi waa isatti gurguruu dhaabuu qabna!
10) Magaalaan Shaggar Oromiyaa amaaromsu irraa of-eeguu qaba. Shaggar wiirtuu fi magaaalmataa Oromiyaa waan taheef, mataan isaa Oromoomuu qaba! Sadarkaa sadarkaan Afaan Oromoo magaalaa kana keessatti dursee Oromootaaf, booda immoo namoota maraaf kennamuutu karaa qajeelaa dha. Kana irratti shoorri Mootummaan Naannoo Oromiyaa, OPDOn qabuu murteessaa dha. OPDOn “keenya” mataa olqabateetoo deemuutu isa irraa eegama. Jaarmaan kun shimala seenaa fi eeboo ekeroota gootolii Oromoo jalaa bawuuf, yeroon inni gara qeyee Oromootti, gara gaaddisa Odaa jalaatti deebiwu amma carraan isaa!
11) Warra Habsahaas tahee warri biyyoota alaa isaan manneen seedataa fi daldalaa Oromiyaa keessatti babbanatan, dabrees isaan warshaalee bu’ureeffatan yoo xiqqaate, namoota achi hojjatan keessaa dhibbayyaan 70 (70%) Oromoota tahuutu irra jira. Yoommoo kan hojii-barumsaa fi teeknikaatiin walqabatu tahe, kun akka barbaachisaa tahetti gadi-siquu dandaya. Kana immoo namoonni Habashaa waan dabaan “hammana mindeessinee jirra” jedhaniif, tarroon (liistiin) namoota achi keessa hojjatanii ifaa tahuu qaba!
12) Oromoonni biyya ofii keessatti: Shaggarii fi Jimmattis, Naqamtee fi Dirree Dhawaattis, Fichee fi Gobbattis, Kamisee fi Nageellee Booranaa faattis manneen bunaas tahee, manneen nyaataa seenanii afaan Oromiyaatiin, afaan ofiitiin tajaajilamuu qabu. Wallaalummaa fi sanyummaan nafxanyootaa inni afaan naannoo jiraatanii san isaan lagachiisu kun, hundeedhaan buqqifamee Oromiyaa keessaa darbamuu qaba. Biyya Oromoo keessatti nama achitti dhalatee guddate dhiisitii, qotiyoolee fi fardeen Oromootuu Afaan Oromoo ni dhagayu. Nafxanyoonni fi ijoolleen isaanii sadarkaa kanatti ofumaan of-gadi-buusuu hin qabani. Mootummaan Naannoo Oromiyaa warra manneen seedataa fi daldalaa keessa hojjataniif, barumsa Afaan Oromoo isa ariifachiisaa (“crash course”) toluma akka barataniif karaalee fi haallan mijeessufii qaba!
13) Magaalaawwan Oromiyaa isaan Oromiyaa jalaa baafamuun Toopphiyaa jalatti ramadaman kanneen akka: Finfinnee Shaggar, Jimmaa, Dirree Dhawaa faa Oromiyaa jalatti deebiyuun achumatti ramadamanii yoo barbaachisaa tahes, Oromiyaa jalatti mataa isaanii dandayuutu sirrii dha. Magaalaan biyya obbolaa keenyaa kan warra Sidaamaas, Hawaasaan bulchiinsuma Sidaamaa jalatti ramadamuu qaba. Otoo nuti dhalawwan Oromoo jirruu, otoo Dhaloonni Qubee impaayerittii-raasaan kun jiruu, abadan Oromiyaan teenya akka dullacha masqalaatti hin qircamtu! Uummanni keenya qeyee fi araddaa abbootii fi haadholii isaa irraa hin buqqifamu! Kakuu dha; laguu dha; qabsoo irraa duubatti hin deebinu!
Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi sonaan kabajamoo, kunoo ani wanneen natti muldhatan isiniif dhiyeesseen jira. Kana irratti kanneen dabalamuu qaban yoo jiraatan, warri biroo dabaluu dandayu. Garuu, ee garuu yaa Oromoo kiyya dubbiin amma waraqaa kana keessatti tarreeffame, dubbii dubbisuun bira dabramuu miti. Mee adaraa hundi keenya iyyinee, iyya harmee Oromiyaa haa dabarsinu!
* Taammanaa Bitimaa: “ODAA MURTEE CACCABSITAA?“, “MANDIISUU“, Hidhaa 6, Lakk. 1, Bitootessa 2004, fuulee 47-49.
Previous Kenya car bomb kills four in Nairobi’s Pangani quarter
Next Oromiyaa; Haroomaayaa/ Gaaffiin keenya kun nuuf hin deebi`u taanaa qabsoon keenya hamma lubbuu keenya kenninutti itti fufa